ISPO Munich Jan.26 kuna Jan.29, 2020, tinokutambira dumba yedu C6.431-6
Acupressure Rakasonererwa Mupiro
Yoga Socks, Bags & Vamwe
ROKUITA & Fitness
Tinotarisa yedu R & D chikwata sezvo simba redu kusimukira, isu nguva dzose isa 10% mambure purofiti kupinda R & D, tiri yekudzidza pamusika uye ongorora musika muitiro, iyo zvinowanisa yakawanda pfungwa, tikatora vamwe kukurukura zvedu nyanzvi vatengi kumativi nyika. Vamwe vakabvuma pfungwa achava zvakagadzirwa gadzira, kutaurirana zvakare uye zvakare ......, pakupedzisira kuswedera iri kunotangira yedu R & D chikwata, The inotevera iri kuita kokupedzisira mharidzo, Zvino isu tiende rinotevera step- "gadzira"
Tine mafekitari zvedu izvo gadzira Hula Hoop, Neck uye Back rutsigiro Products, Acupressure Products uye Kufungisisa Products muna Ningbo, Pataingogamuchira Zvinorayirwa vatengi vedu, rokutengesa edu munhu reconfirm zvose pamwe makasitoma edu. Pashure paizvozvo, mafekitari achaita Pre-Production ivhu fekitari kuchatanga vakawanda kugadzirwa kana PP ivhu kunosimbiswa. fekitari kugadzira fuma maererano ISO9001 yepamusoro utariri hurongwa 2008, uwane mashoko pamusoro unhu hwedu kuzvidzora, Go rinotevera nhano - "Unhu kudzora"
Unhu kuzvidzora yedu ino rinokamukana kupinda 3 parts- zvinhu yepamusoro kudzora (rokuongorora asati kupinda yedu zvinhu yokuchengetera zvinhu kana vasati production), unhu kuzvidzora panguva vakawanda kugadzirwa uye unhu rokuongorora pashure kugadzirwa. Unhu yedu kuzvidzora kuri mujinga pasi ISO9001 yepamusoro utariri hurongwa, zvakabudiswa rokuongorora maererano Ndinogara (Kubvuma Quality usanyanyoratidza) 2.5 mitemo. QC wedu achaita rokuongorora mishumo mumwe murayiro. Mushure vatengi pakuongorora rokuongorora mishumo nekusimbiswa, Tichapinda anotakura kuzobudisa.
Marketing uye Sales
Yakanaka yokutengesa ndiko kuwana okupedzisira nemakasitoma 'chaiye zvinodiwa uye kuwana yakakurumbira zvigadzirwa pamisika nokuda vatengi vedu, yokutengesa wedu chikwata uye R & D chikwata vanogara kushanda pamwe kuti itsva zvigadzirwa kuzosangana okupedzisira nemakasitoma' zvinodiwa. rokutengesa yedu munhu acharamba kutevera nzira itsva pfungwa uye zvigadzirwa kubva kwedu yokutengesa chikwata uye R & D chikwata uye vanosundira zvigadzirwa zvitsva uye akakurumbira zvigadzirwa kuti vatengi edu, Isu tichifunga professionalization uye basa mweya, kwakadaro sezvo tiri kushandisa rurimi rwaamai kushumira vatengi vedu . Tinofunga munhu kukurukurirana kwakanaka ndicho hafu kubudirira.
Tinotarisa wakurukura ose sezvo pokutangira itsva kurongeka. Mushure nhumbi muchikepe kunze, Tichapinda gadzirira ose zvinyorwa kuti vatengi tonotora zvinhu zvakanaka, Kubatsira vatengi sei kunhonga nhumbi kana zvichidiwa. Isu ndichatuma "chimiro dzinogutsa" kuti vatengi pashure pemazuva akawanda. Tinotarisa "Customers pakutanga, Contract mweya uye zvikwereti kutanga" sezvo nheyo yedu chawo ari Mutual kuenzana, kuremekedzana uye tose tibatsirwe.
A pfupi okusuma pezvitsiga
The muchiso "NEH" yakavakwa muna 2005, The musimboti kuvaka muchiso ichi "NEH" ndiyo hwaro pamusoro Natural (Organic), Eco noushamwari uye Health. The muchiso "NEH" Zvinotoda tsamba yokutanga kuna Natural, Eco noushamwari uye Health. We chose kugadzira uye kuti Natural, Eco Friendly uye utano zvigadzirwa edu vatengi.
The muchiso "SCMO" ndiyewo zita kambani, NDIMWARI AKASIKA maererano China muuzivi "dzidziso zvinhu zvishanu" uye "Fengshui", SCMO mu Chinese ndiye "Xun Mu", Shoko "Xun" muna Chinese ari kuti iye anogona kuenda kwose kwose munyika ane basa, uye yedu basa iri rubatsiro wese zvakawanda hutano, shoko "mu" muna Chinese ndechokuti tinofanira kushanda zvakaoma uye knowhow rimwe zuva, Saizvozvo SCMO (Xunmu) ndiko kuti tinofanira kushanda nesimba uye knowhow rimwe zuva kubatsira muviri ose zvakawanda hutano.
With kukura zvigadzirwa sainzi, The nyika akatonyanya mavara ari zvinhu mumunda kupfuura kare, The zvinhu zvakachinja zhinji minda, vakawanda vanhu magamuchira zvakawanda zvinobatsira kubva mumuviri divi Zvisinei, Hazvina kusaenzana pakati panyama divi uye pfungwa & mweya rwemberi. The muchiso BESELF yakavakwa kugadzira uye vave kufanana zvigadzirwa kuti rubatsiro vanhu kundotora nengaidzo pakati mumuviri divi uye pfungwa & mweya rwemberi.
Mashiripiti BACK MUTSIGIRI
With pave IT, rakachinja vazhinji vanhu kushanda tsika kugara kwenguva refu time.A nguva refu nokugara unounza dambudziko hombodo nomuzongoza yedu, We vanowanzonzwa pasi musana marwadzo uye marwadzo mutsipa, marwadzo uyu chirwere zvingakanganisa nani upenyu hwedu, We yaungapedzera rubatsiro vanhu kunatsiridza mamiriro avo, Ndizvo chikonzero zvizivikanwe "mashiripiti shure rutsigiro" yakavakwa 2011.Now ari zvizivikanwe "vaiita musana rubatsiro" rinonyoreswa mu China, US uye EU
Pfungwa yokuti "Eco noushamwari" ndiyo nheyo yedu kugadzira zvigadzirwa uye kuti zvigadzirwa uye kuvaka zvisungo zvedu. Muna 2010, Paiva mapiritsi wakange chakakura divi maturo. Taiziva paiva mukana wakanaka chaizvo kwatiri kusunda yedu patsanurika hula hoop, People nguva dzose akati: "uremu, Use hula hoop", isu chete makagamuchira chinhu pauri, Naizvozvo takavaka zvizivikanwe "Weight Hoop" nokuda kwedu hula hoop .Now kurema hoop rinonyoreswa mu China, US uye EU
A pfupi pakatanga chikwata chedu
Research & Development Tinotarisa yedu R & D chikwata sezvo simba redu kusimukira, Taigarotaura akaisa 10% mambure purofiti kupinda R & D, Tiri yekudzidza pamusika uye ongorora musika muitiro, Izvo zvinowanisa yakawanda pfungwa, We vanonhonga vamwe kukurukura zvedu nyanzvi vatengi vakakomba world.Some akabvuma pfungwa achava zvakagadzirwa gadzira, kutaurirana zvakare uye zvakare ......, pakupedzisira kuswedera iri kunotangira yedu R & D chikwata, The inotevera iri kuita kokupedzisira mharidzo, zvino isu tiende kune chinotevera step- "gadzira"
Tine mafekitari zvedu izvo gadzira Hula Hoop, Neck uye Back rutsigiro Products, Acupressure Products uye Kufungisisa Products muna Ningbo, Pataingogamuchira Zvinorayirwa vatengi vedu, rokutengesa edu munhu reconfirm zvose pamwe vatengi vedu, pashure, mafekitari vachatitaka kuti Pre-Production ivhu fekitari kuchatanga vakawanda kugadzirwa kana PP ivhu kunosimbiswa. fekitari kugadzira fuma maererano ISO9001 yepamusoro utariri hurongwa 2008, uwane mashoko pamusoro unhu hwedu kuzvidzora, Go rinotevera nhano - "Unhu kudzora"
Ndezvipi wako mukuru zvinhu & pamisika?
Our chikuru zvigadzirwa vari hula hoop, acupressure bonde, lumbar kurapa midziyo uye nokufungisisa pamutsago. Tine ruzivo kwemakore 10 'mu mukugadzira uye kwekurasira zvigadzirwa izvi. zvigadzirwa edu uye mabasa vari kuvimbwa nevatengi kubva Europe, North America, Oceania uye South Korea, uyo kazhinji ndivo Supermarket mamaneja, purchasers nyanzvi kugwinya uye utano munda, uye Amazon shopkeepers.
Chii shoma kwazvo kuti ndinogona kurayira?
MOQ zvinoenderana chii zvigadzirwa uchifarira. Kazhinji, 50-100pcs / paminiti ruvara nokuda kwedu chikuru zvigadzirwa riri shandika, kana wako customization yksityiskohta haina kuoma. Tichaedza nepatinogona napo kutsigira vatengi yedu yakawiriranwa makomborero.
Rudzii kavha here kupa & Tinogona gadzirisa?
Standard kavha ndiyo + chitaridzi murayiridzo Chinyorwa + ruvara bhokisi (kana tsamba bhokisi) + atorwa bhokisi. Zvingava nzira inobva zvirevo zvenyu. Our nyanzvi mugadziri ichataura nzira zhinji uye pfungwa itsva pamusoro kavha.
Ungakwanisa zvinopa katarogu mishonga yenyu yose?
Ehe. Tine zvine huru zvigadzirwa voga. Tinofara kutuma kwamuri kwemabhuku munyika PDF kana mufananidzo pamanyorerwo kuburikidza e-mail kana magariro Apps.
Unoona anopa imwe kurayira Chinyorwa sei kushandisa chigadzirwa?
Ehe. Tinogona kupa instrucion Chinyorwa mashoko ayo basa, kushandiswa, uye kuita kuti Nezvokusaita nokuda zvinhu zvedu zvose.
tinogona kugadzira mumwe kana vamwe customized mavara?
Ehe. Tine dzimwe mavara kusarudzwa uye ndikuratidzei nzira. Tinogonawo customized mumwe ruvara itsva kwamuri. Just isu kuudza Pantone nhamba kana kutumira kwatiri ruvara waungapa.
Chii mharidzo mutengo?
Tinofara kupa mumwe akasununguka kugara mharidzo iwe paunenge uchifanira kubhadhara mitoro uye mamwe ivhu. Dzimwe muripo vachapiwa mhosva nokuda customized mharidzo nokuda tine kuti chimiro bhodhi pakudhinda. Unogona kuripa kuburikidza PayPal kana Chinese bedzi AliPay uye WeChatPay. Kana kukurukura nguva, tapota kuwana pepa pazasi.
Shipping nharaunda Delivery nguva ne Express
Tiri kutsvaka GOTS vanopupurirwa nokufungisisa pamutsago, une nayo?
Ehe. Kurangarira yedu piro vakapfuura GOTS advertising. zvigadzirwa edu ose zvakaitwa hakuna zvinokuvadza zvinhu. Nokuti vose zvitupa mashoko tapota kuwana pepa pazasi.
ruzivo advertising mvumo bvumidzwa
fekitari yedu GOTS, BSCI, ISO9000
zvinhu zvedu hula hoop CE, kusvika, ROHS, AZO, EN71,6P Ehe
acupressure bonde CE, ROHS, EN957, titaure Ehe
mashiripiti musana rutsigiro CE Ehe
kufungisisa pamutsago ROHS, EN71, GOTS
Rinhiko ndiyo kugadzirwa nguva uye kutumirwa nguva mumwe murayiro?
Isu weekly yedu otomatiki dzaFord nokuda hula hoop uye acupressure bonde izvo zvinoshamisa shortens kurimwa nguva mazuva 15 chete 40HQ mudziyo. Nokuti dzimwe zvigadzirwa mureza kugadzirwa kutungamirira nguva yava nemazuva 20.
Destination chiteshi Delivery nguva nomugungwa
Chii muripo wako izwi?
muripo wedu rinowanzoshandurwa ndiye T / T 30% sezvo okubhengi, 70% pamusoro B / L kopi.
Unoziva kupa mumwe basa?
Tine nyanzvi uye vaneshungu mifananidzo chikwata huru photostudio mazhinji equipments izvo zvinobatsira kupa kutsigira mabasa akafanana yakakwirira mhinduro okushambadza photo, muenzaniso pikicha uye vhidhiyo vatengi.
Contact nesu pamusoro bhizimisi kana chigadzirwa chiri akanyorerwa iwe! Taura nesu
NEH (Ningbo) Industry & DZAISHANDISWA CO., LTD.